Yeroon amma keessa jirru yeroo walitti hidhatni Adduunyaa ( Globalization) garmalee itti dagaagedha. Adduunyaan walitti dhufeenyi isii yeroodhaa gara yerootti dabalaa adeemu kana keessatti immoo faaydaawwan keessaa argamanis akkasuma dabalaa adeemu. Giloobaalaayzeeshiniin biyyootni guddachaa jiran biyyoota guddatan waliin hidhatni isaanii akka dabaluufi faaydaan garlameenituu akka dagaagu faaydaa guddaa qaba.
Faaydaalee gara kanaan argaman keessaa inni tokko sagantaaleen misooma dargaggootaa ( youth development and empowernment) yeroodhaa gara yerootti dabalaa adeemuu isaati. Carraaleen barnoota dheeraa ( BA, MA akkasumas PhD) babal’achaa jiru, leenjiwwan gaggabaabon baay’inaan gaggeeffamaa jiru, sagantaaleen muuxannoo waliif qooduus akkasuma dagaagaa jira. Haa ta’u malee dargaggoon keenya carraalee argaman kanneenitti hamma barbaadamuun fayyadamaa jira jechuun hin danda’amu.
Kanaafuu fuula kanarratti dargaggoon keenya odeeffannoo waqtaawaafi faaydaa qabeessa ta’e akka argatan ni godhama. Carraa argamu kamittuu bifa faayda qabeessa ta’een akka itti fayyadamus deeggarsi gorsaafi yaadaa barbaachisoon ni kennamu. Namootni gama kanaan muuxannoo gahaafi amansiisaa qabanis carraa kanatti fayyadamanii lammii ofiif deeggarsa barbaachisu hunda akka godhaniif carraan ni kennama.